China Desktop Type isina waya charger TS01 fekitori uye vanotengesa | Lantaisi
TS01 idesktop mhando isina waya charger iyo inogona kuiswa pamusoro padesiki, tafura uye kunyangwe chero zvimwe zvinhu 'nzvimbo yekuchaja nharembozha yako zvisina waya.
Rondedzero yeDesktop Type isina wayajaja TS01
Kuisa: DC 5V-2A, DC 9V-1.67A Saizi: Ø100 * H7.6mm
Zvinobuda: 10W kana 15W Ruvara: nhema, chena uye yakagadzirirwa
Kutengesa Kure: 8mm Saizi yepakeji: 124 * 115 * 23mm
Standard / Chitupa: Chitupa cheQI, FCC, CE, ROHS Pasuru uremu: 128g
Kutengesa Mutengo Wekutendeuka: ≧ 80% Saizi katoni saizi: 400 * 315 * 375mm (108 hrs por atorwa)
Kurema kwese: 65g Master katoni uremu: 12.5kg
Pasuru zvemukati: Mudziyo, 1m refu Micro USB tambo, mushandisi bhuku
Mukati me smartphone yako mune inogamuchira induction coil yakagadzirwa nemhangura.
Iyo isina waya charger ine yemhangura transmitter coil.
Kana iwe ukaisa foni yako pajaja, iyo transmitter coil inogadzira iyo electromagnetic munda iyo iyo inogamuchira inoshandura kuita magetsi kune yefoni bhatiri. Maitiro aya anozivikanwa se electromagnetic induction.
Nekuti iyo yemhangura inogamuchira uye yekuparadzira makoiri idiki, isina waya kuchaja kunoshanda chete pamusoro pfupi pfupi nzvimbo. Zvigadzirwa zvemumba zvakaita semabrashi emazino emagetsi uye magera ekugera ave achishandisa tekinoroji inoitisa induction kwemakore mazhinji atove.
Zviripachena, iyo sisitimu haina waya isina waya zvachose sezvo uchiri kufanira kuvhara plug mukati memayina kana chiteshi che USB. Zvinongoreva kuti haufanire kubatanidza tambo yekuchaja kune yako nhare mbozha.
CHII CHINONZI 'QI' CHISINA KUTI CHARGING?
Qi (yakanzi 'chee', iro chiChinese izwi rekuti 'simba kuyerera') ndiyo isina waya yekuchaja mwero inogamuchirwa nevakuru uye vanonyanya kuzivikanwa vagadziri vehunyanzvi, kusanganisira Apple neSamsung.
Inoshanda zvakafanana nechero imwe tekinoroji yekuchaja isina waya - ingori kuti mukurumbira wayo uchikwira zvinoreva kuti yakurumidza kukunda vakwikwidzi vayo seyero yepasirese.
Qi kuchaja kwave kutowirirana neazvino mamodheru eApple, senge iPhones 8, XS uye XR uye iyo Samsung Galaxy S10. Sezvo mhando nyowani dzave kuwanikwa, ivowo vanozove neQi isina waya yekuchaja basa rakavakirwa mukati.
Pashure: Desktop mhando isina waya charja DW02
Zvadaro: Desktop Type isina waya charger TS01 PU